Ungagqoka kanjani okubomvu ngesitayela kulo Khisimusi | Amadoda aSitayela
Izingubo ezibomvu nezesekeli kuzokusiza ukubukeka kwakho kuhambisana nomoya wakho kaKhisimusi.
Kusukela kuma-jumpers kuya kuma-tuxedos, nayi eminye imibono ye gqoka uKhisimusi onemibala eminingi ngesitayela lo Khisimusi.
1 Ijezi elibomvu le-zip
2 I-tuxedo ebomvu ebomvu
3 Ijezi elibomvu le-turtleneck
4 Ijezi eliboshwe elibomvu iJacquard
5 Ithayi elibomvu
Ijezi elibomvu le-zip
UMnu Porter, € 750
Ama-Zip-up jumpers angama- umbono omuhle ngobusuku obandulela uKhisimusikanye nesidlo sosuku lukaKhisimusi. Yibhangqe ngamabhulukwe okugqoka noma amajini angenalutho. Qedela ukubukeka ngezicathulo ezi-brogue, amabhuzu amaqakala ehlane noma amateki.
I-tuxedo ebomvu ebomvu
UMnu Porter, € 3.700
Ama-Emanates vibes zemikhosi futhi zikanokusho ngebhantshi elibomvu le-velvet tuxedo. Yigqoke ku-New Years Eve nangezinsuku zakho ze-Black Tie ngesikhathi samaholide. Ungayigqoka ngendlela yesiko (ngehembe nothayi womnsalo) noma uye kokuthize okungekho emthethweni, njengama-turtlenecks nezikibha.
Ijezi elibomvu le-turtleneck
UZara, € 29.95
Ijezi elibomvu le-turtleneck lingakunika ukudlala okuningi kulo Khisimusi (futhi kulo lonke ubusika ngokujwayelekile). Uma kukhanya, ungayigqoka ngaphansi kwejazi lakho le-tuxedo noma lesudi. Iphinde isebenze izimangaliso ekubukekeni okungajwayelekile nokuhlakaniphile okungajwayelekile, ngokwesibonelo ngaphansi kwengubo yakudala ensundu noma i-peacoat eluhlaza okwesibhakabhaka.
Ijezi eliboshwe elibomvu iJacquard
IFarfetch, € 690
NgoKhisimusi kunezikhathi eziningi zokugqoka amajezi athungelwe iJacquard. Lona ovela eGucci une- uhlamvu olufanayo olulula njengamajezi kaKhisimusi wendabuko, kepha ngokungangabazeki isitayela esiningi ngokwengeziwe. Yibhangqe nejean.
Umango, € 19.99
Esigabeni sezesekeli, bambalwa abangcono kune-tie ongayithola ukuthinta okucashile kukaKhisimusi uma ucabanga ukuthi umcimbi udinga isudi. Yibhangqe nehembe elikhanyayo (elimhlophe noma eliluhlaza okwesibhakabhaka ngokukhanyayo) ukuze likwazi ukugqama.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Faka umbala obomvu ekubukekeni kwakho kulo Khisimusi nale mibono